आफू प्रधानमन्त्री हँुदा आफ्नो गृहजिल्लालाई विशेष दृष्टिले हेरिने गरेको कुरा नेपालका लागि नौलो होइन । सुर्यबहादुरले धनकुटा बनाए, पद्मसुन्दर लावतीले पाँचथर बनाए भन्ने उखान जस्तै प्रचलनमा छन् । इलामबाट उच्च ओहदामा पुगेका धेरै नेता छन् ।
बिगतमा प्रधानमन्त्री पनि इलामले बनाएकै हो । तर उक्त भनाइसँग इलामको कुरा त्यतिबेला मिलेन भन्ने स्थानीयस्तरमा गुनासो थियो ।या त सर्वोच्च ब्यक्तिले नै राष्ट्रलाई गृह माने या उनीहरू इलामलाई अपनत्वको नजरले हेर्दैनन् ।
यति हँदाहुँदै पनि इलाम नगरपालिका ९ (साविक इनपा ५)स्थित सुकिलुम्बामा विमानस्थलको शिलान्यास तत्कालीन प्रमबाट भयो । इलामबासीहरू मनमनै विमानमा उडे । दजनौँ नागरिकले इलाम नगरपालिकालाई थोर थोरै मुआब्जा लिएर आफ्नो जमिन पास गरिदिए र बसोबास अन्यत्र सारे । यो ०६६।०६७ को कुरा हुनुपर्छ ।
नगरपालिकाले २६६ रापनी जमिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नामसारी गरिदिएको छ । पछि ३२५ रापनी जग्गा स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा लिएर नगरपालिकामार्पmत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएका छन् । यसरी जग्गाको जोहो भइसकेपछि निर्माण शुरु भएको बिमानस्थलको काम त भइरहेको छ, तर अत्यन्तै ढिलो भएको जस्तो देखिएको छ ।
विमानस्थको लागि पहिलो वर्ष एक करोड मात्र रकम निकासा भएको थियो । त्यसैगरी हरेक वर्ष थोरै रकममात्र छुट्याएर थोरै काम मात्र गरिँदै आएको हुँदा बिमानस्थलको काम अत्यन्तै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । पाँचवटासम्म विमान पर्किङ गर्न सकिने आठसय मिटर लामो छसय मिटर चौडाइ भएको विमानस्थलको निर्माण के अब पक्कै निर्माण होला त ? यस देशमा जनताले भनेर केही होला जस्तो देखिराखेको छैन । संविधान निर्माणको लागि दुई दुई वटा निर्वाचन गरेर संविधानसभा बनाउनु पर्यो । संविधान बनाउने बेलामा नेताबाहेकका सबै सभासदहरूले ब्यवस्थापिका संसदको भूमिका मात्र निर्वाह गरे । प्रमूख चार दलका नेता मात्रको सहमति नहुँदा संविधान बनिसकेर पनि रोकियो । पछिल्लो संविधानसभाले बनायो ।
देशको मूख्य र पूर्ण अपेक्षित बिषय यसरी बरालिन्छ भने बजेट र निर्माणसँग सम्बन्धित इलाम जिल्लाको महत्वको बिषय विमानस्थल कहिले बनिएला त ? नेताहरू उनै छन् कतै सुदृष्टि पाइयोस् र काम फत्ते होस् भन्ने इलामबासीको चाहना हो । त्यो सँगसँगै अहिलेका निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश क्षेत्र र स्थानीय तहहरूमा सहजको यातायात, ब्यापारिक गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा पनि ध्यान जाओस् ।